Sarkaal ka tirsan shirkadda DP world oo lagu dilay Bosaaso
By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Monday, 04 Feb 2019 08:19 AM / 0 Comment / 50 views
Waxaa maanta Magaalada Boosaaso ee xarunta Ganacsiga maamulka Puntland lagu dilay Agaasimihii Shirkadda lagu magacaabo P&O oo hoostagta Shirkadda lagu magacaabo PD World oo gacanta ku heysa dhismaha Dekedda Magaalada Boosaaso.
Ninka la dilay ayaa lagu Magacaabi jiray Paul Anthony Fermosa oo kasoo jeeda Dalka Talyaaniga ahaana madaxa DP World ee dekadda Bosaaso tan iyo Bishii Oktoobar 2017.
Dilka waxaa uu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn Dekedda Boosaaso, waxaana ninkaan toogtay wiil yar oo la sheegay in uu ka mid ahaa kuwo kabaha Caseeya sidda ay Risaala u xaqiijiyeen Hay’addaha Ammaanka Puntland.
Waxaa uu tagay goob ay degan yihiin Kaluumaysato ka cabanaysay go’aamo ay soo saartay shirkadda DP World oo ahaa inay isaga guuraan goob shirkaddo ay degi rabtay, waxaana la dilay xilli uu dadka ku amraayeen in ay goobta ka guuraan sidda ugu dhaqsiyaha badan.
Ciidanka Ammaanka ayaa isla goobta ku toogtay wiilyar ee la sheegay in uu dilay Madaxa Shirkadda DP World ee Boosaaso.
Al-Shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyadda dilka Agaasimaha.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa Warbaahinta Kenya qaarkood iyo kuwa Gudaha Soomaaliya ay qorayeen...
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo ay wehliyaan La-taliyayaal iyo Agaasime-waaxeedyo...
Safiirka Ingiriiska ee u fadhiya dalka Mareykanka, Sir Kim Darroch ayaa is xilka iska casilay kaddib...
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya...
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa Warbaahinta Kenya qaarkood iyo... Read more →
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo ay wehliyaan La-taliyayaal... Read more →
Safiirka Ingiriiska ee u fadhiya dalka Mareykanka, Sir Kim Darroch... Read more →
July 8, 2019 7:05 am
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamanka Federaalka Jamhuuriyadda... Read more →
Urur Goboleedka IGAD ayaa soo dhaweeyay howlaha dib u heshiisiinta... Read more →
Muuse Biixi oo ka hadlay go’aankii Soomaaliya xiriirka ugu gartay Guinea
July 8, 2019 6:59 am
Madaxweynaha jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland, Muuse Biixi... Read more →
Amiirad ka baxsatay Imaaraadka Carabta
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay warbaahinta reer galbeedka ayaa... Read more →
Muhaajiriin lagu duqeeyay dalka Libya
Ugu yaraan 40 muhaajir oo kasoo jeeda qaar ka mida... Read more →
Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Guriceel
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Xasan Cali Khayre iyo... Read more →
RW Itoobiya oo sheegay in la isku dayay in la afgambiyo muddo 7 jeer ah
Ra’isul wasaaraha Itoobiya dr Abiy Axmed ayaa sheegay inta uu... Read more →